फुटबल विकासको कुरा गर्ने शेर्पा नेतृत्वमा मौलाइरहेको ब्यापक भ्रष्टाचार » Mero Khel
५,आश्विन,२०७८ ( Tuesday, September 21, 2021 ) 10: 31 am
MeroKhelPosted on १६,श्रावण,२०७८ July 31, 2021 २ महिना पहिले
करिब साढे तीन वर्षअघि नेपाली फुटबलमा भ्रष्टाचारको ब्यापक जालो बढ्दै गएको र त्यसलाई सफा गर्ने चर्काे नारासहित कर्माछिरिङ्ग शेर्पाको नेतृत्वको प्यानलले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा पाइला टेक्यो । तर पाइला टेकेको केही दिनदेखि नै शेर्पाको प्यानलले लाखौं रकम खर्चिएर चुनाव जितेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आवाज उठाउन थाले । तर त्यसबेला आवाज उठाउनेहरु आफै नै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने बिल्ला झुण्ड्याइएको पात्र हुन् भन्दै शेर्पामाथिको आरोपमा कसैले विश्वास नै गरेनन् । यद्यपी त्यो मामिला आवाजमा मात्र होइन कानुनी उपचारको कठघेरासम्म पनि पुगेकै थियो ।
अन्तराष्ट्रिय फुटबलमा तीन दशकभन्दा लामो यात्रा तय गरिसकेको नेपाली फुटबल कहिल्यै पनि सफा र आलोचनामुक्त भएकै छैन । नेपाली फुटबलको विषय उठान गर्दा एन्फाका तत्कालिन अध्यक्ष गणेश थापामाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा विश्व फुटबलको सर्वाेच्च नियामक निकाय फिफाले लगाएको दश वर्षे प्रतिबन्धको विषय अहिले उठान गर्न आवश्यक छैन । तर थापालाई नै पात्र बनाउँदै फुटबलको विकास हुन नसकेको र त्यो प्रवृति अन्त्य गर्दै धमिलिएको नेपाली फुटबलको साखलाई सङ्गल्याउने जिम्मेवारी आफू लिन तयार रहेको भन्दै चेन्ज एन्फाको पपुलिस्ट नारा घन्काउँदै शेर्पाले एन्फाको अध्यक्ष पद हत्याए । २०७५ बैशाख २१ गते चुनावी जितलगतै सोही दिन करिब ५ लाखबढीको मदिरापानसहितको पार्टी गरेको बिल पनि एन्फाको बैंक खाताबाट भुक्तानी गरेको शेर्पाको प्यानलले भ्रष्टाचार नगर्ला भन्ने विश्वास गर्न त गाह्रो नै थियो । तर हौसिएको गोरुले जस्तो सुकै खेत पनि खन्न सक्छ भने जस्तै खुबै उफ्रिएका झुण्डलाई शंकाको सुविधा दिन मुश्किल भने थिएन ।
गणेश थापको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष रहिसकेका कर्माछिरिङ्ग शेर्पा र सदस्य रहेका पंकजविक्रम नेम्वाङ्ग थापाको कार्यशैलीको कट्टर बिरोधी थिए र उनीहरु थापाबिरुद्ध सो समयबाट नै आन्तरिक देखि एन्फा र एफसी लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायसम्म पनि आवाज उठाए । फलस्वरुप थापाले उनीहरुलाई कार्यसमितिबाट नै हटाइदिएका थिए । त्यसपछि शुरु भएको थियो एन्फामा चेन्ज एन्फाको लहड । यसबिचमा थ्री स्टार क्लबका अध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठ एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्ष बने भने दुखद रुपमा उनको बिजुली सट हुँदा करेन्ट लागेर मृत्यु भयो । त्यसपछि नरेन्द« श्रेष्ठले पनि एन्फाको अध्यक्ष पद सम्हाले ।
आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको एजेण्डा भन्दै शेर्पाको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालको पहिलो बैठबबाट नै आर्थिक र कर्मचारी नियमावलीको बारेमा भ्रामक प्रचारप्रसारलाई अघि बढायो ।
एन्फाको १९औं साधारणसभा २०७७ मा ६ गते सानेपाको एक पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भयो । उक्त साधारणसभा भित्र चलिरहँदा शेर्पाकै झण्डा बोकेर २०७५ बैशाख ११ गते चुनावी दौडमा हिड्नेहरु बाहिर पम्प्लेटसहित नै आर्थिक अनियमितताको खाता खोलिनुपर्ने र विधि विधान अनुरुप चल्न नसकेको भन्दै बिरोध जनाइरहेको पनि घटना बाहिर आयो ।
उक्त साधारणसभाले खर्च र आम्दानीको विवरणलाई पास गर्याे जसमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च बढी रहेको थियो । उक्त अनुमोदित आर्थिक विवरण अनुसार एन्फाको खर्च ४१ करोड २६ लाख रहेको थियो भने आम्दानी ४० करोड २६ लाख थियो । हुन पनि आम्दानी गर्ने कार्यक्रम भन्दा खर्च गर्ने कार्यक्रम बढी भएपछि विवरण पनि उसै उसै नै आउनु स्वभाविक हो ।
आर्थिक प्रतिवेदनको नाममा आम्दानी र खर्च एन्फाले सार्वजनिक त गर्याे तर एन्फाले आर्थिक पारदर्शिता र कार्य सुशासनको नारालाई सूचनाको हकसँग जोड्ने हिम्मत भने देखाएन । उसले आफ्नो वेबसाइटमा अन्य नचाहिदो अनेक विवरण भने बडो साजसज्जाका साथ प्रकाशन गरेको छ तर १९औं साधारणसभाको आर्थिक प्रतिवेदन लगायतका अन्य निर्णयहरुलाई राख्न चाहेको छैन ।
सोही साधारणसभामा एन्फाको अडिट एण्ड कम्प्लायन्स्ले प्रस्तुत गरेको २८ बु्ँदै प्रतिवेदनको जवाफ भने कर्माछिरिङ्ग शेर्पाको कार्यसमितिले अझै पनि आम नेपाली फुटब समर्थक र फुटबलसँग सम्बन्धित जिज्ञासु ब्यक्तिहरुलाई दिन सकेको छैन । जसले प्रष्ट के गर्छ भने शेर्पाको नेतृत्वले आर्थिक अनुशासनको जति सुकै चर्काे नारा लगाउँदै आएपनि यथार्थमा पालना भने भएको देखिदैन । एक वाक्यमाभन्दा नेतृत्व फेरिएपनि भ्रष्टाचारको प्रवृति भने एक रती पनि फेरिएको छैन ।
लेखा निति आर्थिक नियमावली विपरित
एन्फाले बनाएको लेखा नितिहरु उसकै विधान र आर्थिक नितिमा उल्लेख भएको देखिदैन । कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय दाताहरुले प्रदान गरेको अनुदान रकमलाई रेस्ट्रिक्टेड र अनरेस्ट्रिक्टेड शिर्षकमा प्रदान गरिएको हुन्छ तर एन्फाले आफ्नो लेखामा दुबैलाई गाबेर अन्तिम लेखामा गाबेर देखाउने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा कुन शिर्षकमा आएको अनुदान हो भन्ने ठम्याउन सकिन्न । माथि उल्लेखित रेस्ट्रिक्टेड अुनदान भन्नाले खर्च गर्ने शिर्षक तोकिएको र अनरेस्ट्रिकटेड भन्नाले खर्च गर्ने शिर्षक भएको तर उक्त बजेटलाई अन्य कतै चाहिएमा प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने बुझिन्छ ।
एन्फाले खरिद गरेको जिन्सी सामाग्रीहरु छुट्टै सफ्टवेयरमा राख्दै आएपनि त्यो सफ्टवेयर मुख्य लेखा प्रणालीमा जाडेको छैन । जिन्सी सामाग्री खरिद गर्दा कुनै पनि संस्थामा शुरुमा खरिद आदेश फारम भरेर प्रक्रिया अघि बढ्छ भने एन्फामा सामाग्री खरिद भएपन सिधै बिल अनुसारको रकम सफ्टवेयरमा राखिएको देखिएको छ । जसले कुन गुणस्तरको खरिद गर्न भनिएको र कुन खरिद गरिएको भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन ।
पेश्की फछ्र्याैटमा समेत सरकारलाई करोडौ कर छल्ने प्रयास
एन्फाकोे पेश्की विवरण अनुसार ४ करोड ८९ लाख ७ हजारभन्दा बढी रहेको देखिएको थियो जसमध्ये प्रति ब्यक्ति ५ लाख वा सोभन्दा बढी पेश्की फछ्र्याेट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । एन्फाको कुल देखिएको पेश्कीमध्ये अझै पनि २ करोडभन्दा बढी फछ्र्याेट हु्न बाँकी रहेको छ । र असुल भएको पेश्कीमा पनि १० प्रतिशत ब्याज थप गरेर उठाएको पाइँदैन ।
यसबाहेक पुरानै पेश्की फिर्ता गर्न बाँकी रहेकाहरुको पनि चित्त बुझाउन र थम्थम्याउन थप पेश्की प्रदान गरिएको छ । पेश्की फछ््र्याेट गर्नेहरुले पनि आशिंक रुपमा फछ्र्याैट गरेको पाइयो ।
एन्फाको आर्थिक गतिविधिमा कुशासन रहेको प्रमाणको रुपमा पेश्की फछ्र्याेट विवरण बुझाउने क्रममा आन्तरिक राजस्वको कार्यालयमा प्यान नम्बर नभएको बिलहरु बुझाइएको छ ।
यतिमात्र होइन एन्फाको अडिट गरको कम्पनी चार्टर्ड एड्भाइजरी सोलुसन प्रा. लिका अनुसार फछ्र्याैट भएका पेश्कीमा पनि ३२ लाख भन्दा बढी त कैफियत रहेको देखिएको छ ।
आम्दानी र खर्चको श्रोत के मा छ ?
एन्फाभित्र आम्दानीको श्रोत के के हो भन्ने एउटा खाता समेत राखेका पाइएन । एन्फाले ग्रासरुट कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गरेको शनिबारको ‘स्डाटरडे ट्रेनिङ्ग प्रोग्राम’ बाट हुन आएको आम्दानी र विभिन्न प्रतियोगिताबाट हुने टिकट विक्रिबाट भएको आमदानी रकम ४४ दिनसम्म होल्ड भएर मात्र बैकमा जम्मा भएको पाइएको छ । यो ४४ दिनसम्म एन्फाको कुन कर्मचारीले कुन विषयमा यसको आमदानी प्रयोग गर्याे भन्ने जवाफ एन्फा दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।
कर्मचारी भर्ना र ब्यवस्थापनमा नेतृत्वको मनपरि
एन्फामा मानव स्रोतको ब्यवस्थापन निति नै छैन । कर्मचारीको भरणपोषण र उसको तलब भत्ता र बढुवा र घटुवाको तालाचाबी नेतृत्वका हातमा मात्र रहेको छ । एन्फाले भर्ना गरेका कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत फाइल विवरण अद्यावधिक नै छैन । कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि आफन्त र आसेपासेलाई प्राथमिकतमा राखिएको प्रष्ट छ । ती कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता र कार्य विवरण स्वयं कर्मचारीलाई थाहा नभएको पाइएको छ ।
उदाहरणका निम्ति एन्फाले आर्थिक विभाग प्रमुख चयन गर्दा पनि उसले नै बनाएको पदपूर्ति समितिले प्रक्रिया पुरा गरी दिएको नामको ब्यक्ति एन्फाको नेतृत्व तहले खारेज गर्दै वैकल्पिकको रुपमा रहेको निरन्जन शाहलाई आर्थिक विभाग प्रमुखमा जाँगिर दिएको छ ।
त्यति मात्र होइन शाहलाई एन्फाको संचालक समितिले निर्धारण गरेको तलबसुविधा भन्दा बढी नै तलब दिने गरेको पाइएको छ । संचालक समितिले उनलाई ६५ हजार र राजस्व बराबरको तलब तोकेकोमा उनले एन्फाबाट एक लाखभनदा धेरै बढी तलब थाप्ने गरेको पाइएको छ । यति मात्र होइन दुई वर्षको अवधिमा शेर्पा नजिकका भनिएका कर्मचारीको तलबमा दोब्बर बढोत्तरी भएको प्रमाणित छ ।
लेखा विवरणको यकिन तथ्यांक किन राखिएन ?
एन्फाले खरिद समिति त ठगन गरेको छ तर उक्त समिती पूर्ण रुपमा निष्कृय नै छ । एन्फाले खरिद गर्दा अर्थिक नियमावलीहरु टेकेर आर्थिक अपचलन गर्ने प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । सामान्य विषयम जस्तो लाग्न सक्छ तर एन्फाले संचालन गरेको होस्टल र सो होस्टलको किचन ब्यावस्थापनको कुनै निति नै छैैन । उक्त होस्टलको खर्चको लेखा विवरणमा कुनै वैज्ञानिकता अपनाइएको देखिएन ।
उदाहरणका लागि होस्टलका लागि कुनै खाद्यान्न खरिद गर्दा कुन सामाग्री कति खरिद माँग भएको हो र स्टोरमा भित्रिदाँ कति भित्रियो भन्ने तथ्यांक एन्फासँग छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण केही साताअघि मात्र होस्टर ब्यवस्थापन समितिका सबै सदस्यले दिएको राजिनामा पनि हो ।
एन्फाले राखेको कारोबारको लेखा यथार्थपरक र पूर्णताबाट निक्कै पर छ । एन्फाले मोल्टेन स्पोर्टस् कर्पाेरेसनबाट प्राप्त सामाग्रीहरुको विवरण पूर्ण रुपमा बुझाउन सकेको छैन । थुप्रै विषयमा रहेका खर्चहरु आयकर कट्टी नगरी भुक्तानी गरिएको छ । कट्टा गरिएको आयकर विवरण पनि अन्य शिर्षकको राजस्वमा बुझाइएको छ ।
यसअघि प्रदेश १ ले एन्फालाई प्रदेश लिगको लागि दिएको एक करोडको विषयमा पनि विवादमा आएको थियो । एन्फालाई दिइएको एक करोड अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश एक को संसदमा चर्काे आवज उठेपछि लेखा समिति समक्ष गएर एन्फाले स्पष्टिकरण समेत दिनुपरेको थियो ।
हवाइ टिकटमा पनि करोडौको अपचलन प्रयासको आशंका
एन्फाको आन्तरिक लेखा परिक्षणको क्रममा छनौटमा परेको एक करोड ३६ लाखभन्दा बढीको हवाइ टिकटमा बोर्डिङ्ग पास नलिइ खर्च लेखेको पाइएको छ । यति मात्र होइन अन्तरिक हवाइ टिकटमा पनि एन्फाले टेन्डर मार्फत छनौट गरेको एक ट्राभल एण्ड टुर कम्पनीसँग मिलेर एन्फाको आर्थिक स्रोतको अपचलन गरेको प्रमाण छ ।
एन्फाले अहिलेसम्म खरिद गरेको प्रत्येक टिकटमा हवाई कम्पनीले तोकेको मुल्यभन्दा बढी मुल्यको बिल बुझाउन गरेको एन्फाको आग्रहमा टिकट कम्पनीले बिल पठाउने गरेको पाइएको छ । कम्पनीका अनुसार अध्यक्ष र आथिक विभाग प्रमुखको सहमतिमा ट्राभल एण्ड टुर कम्पनीलाई फसाउन खोजिएको छ ।
Previous Postओलम्पिक दौड शुरु हुन एक घण्टाअघि केन्याली धावकलाई सहभागिताबाट रोकियोPrevious Post
Next Postमध्यरातमा प्रवक्ता राइले फेसबुकमा पोखे असन्तुष्टि–‘गरिब राष्ट्रभन्दैमा स्वाभिमानमाथिको सम्झौता मान्य नहुने’Next Post
Home>फिचर समाचार>फुटबल विकासको कुरा गर्ने शेर्पा नेतृत्वमा मौलाइरहेको ब्यापक भ्रष्टाचार